News - insulator တွင်လည်းခံနိုင်ရည်အားစစ်ဆေးရန်မေးခွန်းများ
insulator တွင်လည်းခုခံ tester ၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လိုင်းများသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးလျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကဲ့သို့သောမတော်တဆမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် insulation resistance tester သည်အမျိုးမျိုးသော insulator တွင်သောပစ္စည်းများ၏ခုခံနိုင်မှုတန်ဖိုးနှင့် Transformers, motor, cable များနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ insulation resistance ကိုတိုင်းတာရန်သင့်လျော်သည်။ ထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
insulation resistance tester ၏ပြtနာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
capacitive ဝန်ခုခံမှုကိုတိုင်းတာသည့်အခါလျှပ်ကာမှုခံနိုင်သည့်စမ်းသပ်သူ၏ output short-circuit current နှင့်တိုင်းတာထားသောအချက်အလက်များအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
insulation resistance tester ၏ output short-circuit current သည် high-voltage source ၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကိုထင်ဟပ်နိူင်သည်။
များစွာသော insulation test object များသည် capacitive load များဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသော cable များ၊ windings ပိုမိုပါ ၀ င်သော motor များ၊ transformer များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တိုင်းတာသည့်အရာဝတ္ထု capacitance ရှိလျှင်စမ်းသပ်မှု၏အစတွင် insulation resistance tester ရှိ voltage voltage အရင်းအမြစ်သည်အားသွင်းသင့်သည်။ Capacitor သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုမှတဆင့်တဖြည်းဖြည်းနှင့် output ကို rated voltage tester ၏ insulation resistance tester ကိုအားသွင်းသည်။ အကယ်၍ တိုင်းတာသည့်အရာဝတ္ထု၏ capacitance တန်ဖိုးသည်ကြီးမားပါကသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဗို့အားအရင်းအမြစ်၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုသည်ကြီးမားပါကအားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကြာကြာကြာလိမ့်မည်။
၎င်း၏အရှည်ကို R နှင့် C load (စက္ကန့်ပိုင်း) ၏ထုတ်ကုန်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ t = R * C ဝန်။
ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်း capacitive ဝန်ကို voltage voltage သို့သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ charging speed DV / DT သည် charg I current charging အချိုးနှင့်ညီမျှသည် D / I / C. DV / dt = I / C.
ထို့ကြောင့်အတွင်းခံခုခံအားနည်းလေလေ၊ အားဖြည့်ပမာဏပိုကြီးလေ၊ စမ်းသပ်ရလဒ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်လေလေဖြစ်သည်။
2. တူရိယာ၏အဆုံး "ဆ" ၏ function ကိုကဘာလဲ? မြင့်မားသောဗို့အားနှင့်မြင့်မားသောခုခံမှု၏စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်, အဘယ်ကြောင့်တူရိယာ "g" terminal ကိုချိတ်ဆက်ထားသလဲ
တူရိယာ၏ "g" အဆုံးတိုင်းတာမှုရလဒ်များအပေါ်စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အစိုဓာတ်နှင့်ဖုန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသောအကာအကွယ် terminal ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တူရိယာ၏“ g” အဆုံးသည်စမ်းသပ်ပြီးသောအရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိယိုစိမ့်မှုစီးကြောင်းကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာယိုစိမ့်သောစီးကြောင်းသည်တူရိယာ၏စမ်းသပ်မှုလမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်၍ ယိုစိမ့်နေသော current ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှားများကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောခုခံတန်ဖိုးကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ, G အဆုံးကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် gg terminal ကို ၁၀ ဂရမ်ထက်ပိုသောအချိန်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ သို့သော်ဒီခုခံအကွာအဝေးအကြွင်းမဲ့အာဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့ပြီးတိုင်းတာနိုင်သောအရာဝတ္ထုပမာဏသည်သေးငယ်သည်၊ ထို့ကြောင့် g-end တွင် 500g ကိုတိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲတည်ငြိမ်နိုင်သည်။ စိုစွတ်သောနှင့်ညစ်ပတ်သောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ခံနိုင်ရည်နိမ့်သည် g terminal လိုအပ်ပါသည် အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောခုခံမှုကိုတိုင်းတာသောအခါရလဒ်တည်ငြိမ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါက g-terminal ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဒိုင်းလွှား terminal G သည်အကာအရံအလွှာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲစမ်းသပ်မှုအောက်ရှိအခြားဝါယာကြိုးများနှင့်မတူပါ။ L နှင့် E အကြားသို့မဟုတ် multi-strand wire ရှိ insulator နှင့်ဆက်သွယ်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
၃။ လျှပ်ကာကိုတိုင်းတာသည့်အခါသန့်ရှင်းသောခုခံမှုသာမကဘဲစုပ်ယူမှုအချိုးနှင့် polarization အညွှန်းကိုတိုင်းတာရန်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
PI သည် polarization index ကို ၁၀ မိနစ်နှင့် ၁ မိနစ်အတွင်း insulation test အတွင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
DAR သည် dilectric စုပ်ယူမှုအချိုးဖြစ်သည်။ တစ်မိနစ်အတွင်းလျှပ်ကာမှုခံနိုင်စွမ်းကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
insulation test တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင် insulation resistance တန်ဖိုးသည် test object ၏ insulation performance အရည်အသွေးကိုအပြည့်အ ၀ ရောင်ပြန်ဟပ်နိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ တဖက်တွင်၊ အသံအတိုးအကျယ်ကြီးမားသည့်အခါတူညီသောစွမ်းဆောင်ရည် insulation ပစ္စည်းများ၏ insulation ကိုခံနိုင်ရည်သည်သေးငယ်ပြီး volume သေးငယ်သည့်အခါကြီးမားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မြင့်မားသောဗို့အားကိုအသုံးပြုသောအခါလျှပ်ကာပစ္စည်းများတွင်အားသွင်းစုပ်ယူခြင်းနှင့် polarization ဖြစ်စဉ်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပါဝါစနစ်သည်စုပ်ယူမှုအချိုး (r60s မှ r15s) နှင့် polarization အညွှန်း (r10min မှ r1min သို့) ကိုအဓိကထရန်စတာ၊ ကေဘယ်၊ မော်တာနှင့်အခြားအမှုများစွာ၏ insulator တွင်လည်းစမ်းသပ်မှုတွင်တိုင်းတာသင့်သည်။ ဒီဒေတာ။
၄။ အီလက်ထရွန်းနစ်ကာကွယ်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာ၏ဘက်ထရီများစွာသည်အဘယ်ကြောင့်မြင့်မားသော DC ဗို့အားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ ၎င်းသည် DC ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကိုအခြေခံသည်။ boost circuit processing ပြီးနောက်၊ supply supply နိမ့်သော voltage သည် DC voltage ကိုမြင့်တက်စေသည်။ ထုတ်လုပ်ထားသောမြင့်မားသောဗို့အားသည်မြင့်မားသော်လည်း output power သည်သေးငယ်သည်။
post အချိန်: မေလ -07-2021
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co. , Ltd. Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့်ဗို့အားမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားစံကိုက်ညှိမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားမီတာ, 1000v- 40kv ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ, High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ, ဗို့အားမီတာ, ထုတ်ကုန်အားလုံး